ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजावादी भनेपछि पत्रकार संग पर्यो चर्काचर्की, रामकुमारी झाँक्रीको झाँको झारे (भिडियोसहित) – Online Nepalaja
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजावादी भनेपछि पत्रकार संग पर्यो चर्काचर्की, रामकुमारी झाँक्रीको झाँको झारे (भिडियोसहित)
February 15, 2021 79
काठमाण्डौ । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई धेरैले राजाबादी भन्ने आरोप लगाउँदै आईरहेका छन् । यद्यपी उनले भने यो केवल आरोपकालागी आरोप मात्र भएको बताउँदै आफु राजाबादी नभएको बताएका छन् । उनले एक अन्तरवार्तामा प्रश्नकर्ताले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै आफु राजाबादी नभएको बताएका हुन् । ‘मैले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाएको देख्नु भएको छ ? मैले कहिल्यै राजा नै चाहिन्छ भनेर भनेको सुन्नु भएको छ ?’ शाहीले भने ।
अभियन्ता शाहीले नेतृ राम कुमारी झाँक्रि प्रक्राउ परेको विषयलाई मिडिया र राजनीतिक दलले प्राथमिकता दिएको भनेर त्यसको चर्को विरोध गरे । उनले भने,‘यो लोकतन्त्रमा कतिजना जनताहरु पक्राउ परे त्यतिबेला कहाँ गएकी थिईन् राम कुमारी झाक्रि ? अनि के हेरेको थियो मिडियाले र किन केही बोलेनन् विभिन्न राजनीतिक दलहरुले ?’ शाहीले अगाडी भने,‘आज राम कुमारीलाई प्रहरीले समात्यो भनेर देशै उचाल्ने ? के अरु नेपाली जनता राम कुमारी जस्तै यो देशका नागरिक हैनन् ?’
शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीको पनि आलोचना गर्न पछि परेनन् । उनले यो देशमा ओली प्रधानमन्त्री भएर के गरे भन्ने प्रश्न गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्री ओली भएर देश र जनताकोलागी के भएको छ ? शेर बहादुर प्रधानमन्त्री भएर के भयो ? प्रचण्डको त कुरै नगरौं । यो देश अहिले केवल ओलीमय र प्रचण्डमय बनेको छ ।’ शाहीले योभन्दा अगाडी पनि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै आईरहेका थिए । उनले वर्तमानदेखि पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतले यो देशकोलागी केही नगरेको बताए । भिडियोसहित
Prevश्रीमानले छोडे, ८ बर्षे छोरालाई व्लड क्यान्सर लाग्यो, रगत किन्ने पैसा पनि नभएपछि भण्डारी पुगेर सहयोग गरे (भिडियो हेर्नुस)
Nextमेरो शरीर भ’द्दा भयो त के भयो? – रेखा
फेरी आज पनि घट्यो सुन को मुल्य
काठमाडौंमा बर्डफ्लू, २५ सय कुखुरा मारियो !
सपनाको गोप्य तस्विरहरु निकालेर देखाइदिम भन्दै बिनय रिसाउँदै आए मिडियामा(हेर्नुहोस भिडियो)
प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, प्रहरीले लियो यस्तो एक्शन
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3186)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2852)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1472)
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम (1057)
‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो) (611)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (419)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (376)